Ọla Laser ịgbado ọkụ Machine GS-200S - China Dongguan Glorystar Laser
Ọla Laser ịgbado ọkụ Machine GS-200S
Product Introduction ● The igwe na-dị ka ergonomics humanization imewe ka igwe ihe kpọmkwem, mma-na-achọ, anụ arụmọrụ, na ogologo ndụ. ● Large n'ime ohere na-eme ka ọ dị mfe na-edebe ngwá ọrụ na eletrik. Laser oke adjuster na-arụ ọrụ na ebe na-eme ka ndị ọzọ adaba iji! ● ọcha na-arụ ọrụ ebe, na egweri na ịgbado ọkụ ájá na ihe onwunwe ● The mgbanwe Ikanam shadowless oriọna ka anyị ihe doro anya na-edebe ịgbado ọkụ ntụpọ. More kpọmkwem ìhè-ntụpọ nwere ike izute to ...
Order ibu: 1 Ibe
● The igwe na-dị ka ergonomics humanization imewe ka igwe ihe kpọmkwem, mma-na-achọ, anụ arụmọrụ, na ogologo ndụ.
● Large n'ime ohere na-eme ka ọ dị mfe na-edebe ngwá ọrụ na eletrik. Laser oke adjuster na-arụ ọrụ na ebe na-eme ka ndị ọzọ adaba iji!
● ọcha na-arụ ọrụ ebe, na egweri na ịgbado ọkụ ájá na ihe onwunwe
● The mgbanwe Ikanam shadowless oriọna ka anyị ihe doro anya na-edebe ịgbado ọkụ ntụpọ. More kpọmkwem ìhè-ntụpọ nwere ike izute ka kpọmkwem ịgbado ọkụ chọrọ.
● Jiri ihe ndị kasị elu na akpaaka-shading usoro iji wepụ ihe mkpali n'anya mgbe igwe na-arụ ọrụ.
● Turu na Efere ìhè-achịkọta oghere si UK, corrosion eguzogide, okpomọkụ na-eguzogide, elu akakabarede arụmọrụ. The ndụ maka ìhè-nzukọ oghere bụ 8-10years. The ndụ maka xenon oriọna bụ karịa 8 nde ugboro.
● Power, usu obosara, ugboro ole, doo size etc pụrụ ịgbanwe na a nnukwu ọnụ ọgụgụ, na-aghọta dị iche iche ịgbado ọkụ arụmọrụ.
● The oke-achịkwa site njikwa na-akàrà uji eze, dị mfe ma elu arụmọrụ
● Fast ọsọ, elu arụmọrụ, oké omimi, obere deformation, obere okpomọkụ-emetụta ebe, elu àgwà ịgbado ọkụ, gburugburu ebe obibi-echebe ma na ọ dịghị mmetọ
● Anụ arụmọrụ, 24-hour nọgidere na-arụ ọrụ
● Humanization imewe, hụ na ogologo oge na-agba ọsọ.
Na ọdabara Industry Materials
Ọtụtụ-eji ụgbọelu, aerospace, egwuregwu ngwongwo, ọla, golf isi, ọgwụ ngwá, ngwá electronic, n'ibu usoro, ụgbọ ala ọrụ. Adabara Gold, ọlaọcha, ọla kọpa, titanium, igwe anaghị agba nchara na ndị ọzọ na ọla 'patch ịgbado ọkụ, ntụpọ ịgbado ọkụ, n'akpa uwe ịrụzi na n'agba n'aka ịgbado ọkụ mgbe ugwu akụkụ.
Max laser ike 200W (nhọrọ)
laser ogologo 1064mm
Max usu ike 70J
laser ugboro 0.2-100Hz
usu Obosara 0.1-20MS
doo nso 0.2-2.0mm
ike oriri ≤6KW
Power chọrọ 380V 50Hz (60Hz) / 220V 50Hz (60Hz)
akara usoro Microcomputer omume akara
jụrụ usoro mmiri jụrụ
Mmepụta laser na-elekwasị anya 110mm
Previous: Anọ Axis Linkag Laser ịgbado ọkụ Machine GS-400-3D
Osote: Advertising Laser ịgbado ọkụ Machine GS-200G
Gold Laser ịgbado ọkụ Machine
ahurunaaya Laser ịgbado ọkụ Machine
ọla Laser welder
Laser ịgbado ọkụ Machine N'ihi-nnucha-ọla
Laser ịgbado ọkụ Machine N'ihi Sale
Portable Laser ịgbado ọkụ Machine
Handheld Fiber Nzipu Laser ịgbado ọkụ Machi ...
Advertising Laser ịgbado ọkụ Machine GS-200G
Anọ Axis Linkag Laser ịgbado ọkụ Machine GS-400-3D
Ugboro abụọ ndi isi Exchangeable Laser ịgbado ọkụ Machine ...